ဆံသားကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ - For her Myanmar
ကြက်သွန်ဖြူ ဆိုတဲ့အသံကြားရင် “အာ..အနံ့ကြီးကို မုန်းလိုက်တာ မကြိုက်ပါဘူး” ဆိုတဲ့ ယောင်းတွေရှိလား။ တကယ်တော့ အဲဒီမုန်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူက မီးဖိုချောင်ထဲက အစွမ်းထက် ဆေးဝါးတစ်လက် ဖြစ်နေပါရောလား ယောင်းရေ။ ဗျူးတီးဆလွန်းတွေသွားပြီး Hair treatment လုပ်စရာမလိုဘဲ အိမ်မှာပဲ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ဆံသား သန်စွမ်းအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဟာ…တကယ်ကြီးလား မေးရင် တကယ်ကြီးပေါ့။
ကြက်သွန်ဖြူရဲ့ ဆံသားသန်စွမ်းစေတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ပြောပြမယ်နော်။
ကြက်သွန်ဖြူမှာ ကယ်လ်ဆီယမ် ၊ ဇင့် ၊ ဆာလ်ဖာတို့လို သတ္တုဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။
ဦးရေပြားက ဘက်တီးရီးယားတွေကို သေစေနိုင်ပြီး ဦးရေပြား သန့်ရှင်းစေပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူမှာပါတဲ့ ဆယ်လီနီယမ် (selenium) ဓာတ်က သွေးလည်ပတ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။
ဆံပင်မွေးညှင်းပေါက်လေးတွေကို သန့်စင်ပေးပြီး ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်း ကင်းဝေးစေပါတယ်။
ဗောက်ပျောက်စေသလို ဗီတာမင် C ပါဝင်တဲ့အတွက် ကော်လာဂျင် (collagen) ကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။
ဒါဆို ကြက်သွန်ဖြူ ဘယ်လောက်အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ သိပြီဟုတ်? ဒီလို အသုံးဝင်တဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကို ဆံသားအတွက် ဘယ်လို အသုံးပြုကြမလဲဆိုတာ ထပ်ကြည့်ရအောင်..
ကြက်သွန်ဖြူ (၈) မြွာ
သံလွင်ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း (၄) ဇွန်း
ကြက်သွန်နီ (အနေတော်) (၁) လုံး
ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ကြက်သွန်နီကို ညက်တဲ့အထိ ထောင်းပါ။ ဒယ်အိုးထဲမှာ သံလွင်ဆီကို အပူပေးပြီး ကြက်သွန်အနှစ်ထည့်ပါ။ ကြက်သွန်ဖတ်လေးတွေ ရွှေရောင်သန်းသွားတဲ့အခါ မီးပိတ်လိုက်ပါ။ (တည့်ပြောရရင် ဆီသတ်ခိုင်းတာ ယောင်းတို့ရေ 😀 ) ဆီအေးသွားတာနဲ့ ဆီစစ်ပြီး ကြက်သွန်ဖတ် လက်ကျန်လေးတွေ ဖယ်ထုတ်ပါ။ ဆံသားပေါ်မှာ အဲဒီရလာတဲ့ အဆီကို လိမ်းပြီး ဦးရေပြားကို ဖြည်းဖြည်းချင်း နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ၁၅ မိနစ်လောက် ကြာပြီဆိုရင် ဦးရေပြားကနေ ဆံပင်အဖျားထိ ဆီလိမ်းပြီး နောက်ထပ် မိနစ် ၃၀ ထားပါ။ ပြီးတာနဲ့ ရှန်ပူနဲ့ ခေါင်းလျှော်ချ လိုက်ပါ။ (ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ လျှော်ရင် ဆီပိုပြောင်ပါတယ်နော်..) ဒီနည်းလမ်းလေးကို တစ်ပတ် ၃ ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ဆံသားသန်စွမ်းဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။
Related Article>>> ယောင်းတို့ရဲ့ဆံသားလေးတွေကျန်းမာနေဖို့ ပျားရည်ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲ။
၂။ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ပျားရည်
ကြက်သွန်ဖြူ (၈) မြွှာ
ပျားရည် စားပွဲတင်ဇွန်း (၁) ဇွန်း
ကြက်သွန်ဖြူတွေကို ကြိတ်ပြီး အရည်ညှစ်လိုက်မယ်ဆိုရင် စားပွဲတင်ဇွန်း (၁) ဇွန်းစာ အရည် ရမှာပါ ယောင်းရေ။ ဒီအရည်နဲ့ ပျားရည်စားပွဲတင်ဇွန်း (၁) ဇွန်းစာ ပေါင်းပြီး နှစ်မျိုးသမအောင် ရောမွှေပါ။ ဆံသားနဲ့ ဦးရေပြားကို လိမ်းပေးပြီး မိနစ် ၂၀ လောက်ထားပြီးရင် ရှန်ပူနဲ့ လျှော်ချပါ။ တစ်ပတ်ကို (၂) ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် (၃) ကြိမ်ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ဆံသားကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ချင်း ကို ညက်တဲ့အထိ ထောင်းပါ။ ဒယ်အိုးထဲမှာ သံလွင်ဆီကို အပူပေးပြီး ကြက်သွန်အနှစ် ထည့်ပါ။ အဖတ်လေးတွေ ရွှေရောင်သန်းသွားရင် မီးပိတ်ပါ။ ဆီအေးသွားတာနဲ့ ဆီစစ်ပြီး အဖတ်လက်ကျန်လေးတွေ ဖယ်ထုတ်ပါ။ ဆံသားပေါ်မှာ ဆီလိမ်းပြီး ဦးရေပြားကို ဖြည်းဖြည်းချင်း နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာပြီဆိုရင် ဦးရေပြားကနေ ဆံပင်အဖျားထိ လိမ်းပြီး နောက်ထပ် မိနစ် ၃၀ ထားပါ။ ပြီးတာနဲ့ ရှန်ပူနဲ့ ခေါင်းလျှော်ပါ။
ကဲ..စမ်းကြည့်ကြရအောင်… တကယ်သန်လာရင် မုန့်ကျွေးနော် 😛
Reference: stylecraze, healthline
ကွကျသှနျဖွူ ဆိုတဲ့အသံကွားရငျ “အာ..အနံ့ကွီးကို မုနျးလိုကျတာ မကွိုကျပါဘူး” ဆိုတဲ့ ယောငျးတှရှေိလား။ တကယျတော့ အဲဒီမုနျးလှပါတယျဆိုတဲ့ ကွကျသှနျဖွူက မီးဖိုခြောငျထဲက အစှမျးထကျ ဆေးဝါးတဈလကျ ဖွဈနပေါရောလား ယောငျးရေ။ ဗြူးတီးဆလှနျးတှသှေားပွီး Hair treatment လုပျစရာမလိုဘဲ အိမျမှာပဲ ကွကျသှနျဖွူနဲ့ ဆံသား သနျစှမျးအောငျ လုပျလို့ရပါတယျ။ ဟာ…တကယျကွီးလား မေးရငျ တကယျကွီးပေါ့။
ကွကျသှနျဖွူရဲ့ ဆံသားသနျစှမျးစတေဲ့ အကြိုးကြေးဇူးတှကေို ပွောပွမယျနျော။
ကွကျသှနျဖွူမှာ ကယျလျဆီယမျ ၊ ဇငျ့ ၊ ဆာလျဖာတို့လို သတ်တုဓာတျတှေ ကွှယျဝစှာ ပါဝငျပါတယျ။
ဦးရပွေားက ဘကျတီးရီးယားတှကေို သစေနေိုငျပွီး ဦးရပွေား သနျ့ရှငျးစပေါတယျ။
ကွကျသှနျဖွူမှာပါတဲ့ ဆယျလီနီယမျ (selenium) ဓာတျက သှေးလညျပတျမှုကို လှုံ့ဆျောပေးပါတယျ။
ဆံပငျမှေးညှငျးပေါကျလေးတှကေို သနျ့စငျပေးပွီး ခြှေးပေါကျပိတျခွငျး ကငျးဝေးစပေါတယျ။
ဗောကျပြောကျစသေလို ဗီတာမငျ C ပါဝငျတဲ့အတှကျ ကျောလာဂငျြ (collagen) ကို မွှငျ့တငျပေးပါတယျ။
ဒါဆို ကွကျသှနျဖွူ ဘယျလောကျအသုံးဝငျတယျဆိုတာ သိပွီဟုတျ? ဒီလို အသုံးဝငျတဲ့ ကွကျသှနျဖွူကို ဆံသားအတှကျ ဘယျလို အသုံးပွုကွမလဲဆိုတာ ထပျကွညျ့ရအောငျ..
ကွကျသှနျဖွူ (၈) မွှာ
သံလှငျဆီ စားပှဲတငျဇှနျး (၄) ဇှနျး
ကွကျသှနျနီ (အနတေျော) (၁) လုံး
ကွကျသှနျဖွူနဲ့ ကွကျသှနျနီကို ညကျတဲ့အထိ ထောငျးပါ။ ဒယျအိုးထဲမှာ သံလှငျဆီကို အပူပေးပွီး ကွကျသှနျအနှဈထညျ့ပါ။ ကွကျသှနျဖတျလေးတှေ ရှရေောငျသနျးသှားတဲ့အခါ မီးပိတျလိုကျပါ။ (တညျ့ပွောရရငျ ဆီသတျခိုငျးတာ ယောငျးတို့ရေ 😀 ) ဆီအေးသှားတာနဲ့ ဆီစဈပွီး ကွကျသှနျဖတျ လကျကနျြလေးတှေ ဖယျထုတျပါ။ ဆံသားပျေါမှာ အဲဒီရလာတဲ့ အဆီကို လိမျးပွီး ဦးရပွေားကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး နှိပျနယျပေးပါ။ ၁၅ မိနဈလောကျ ကွာပွီဆိုရငျ ဦးရပွေားကနေ ဆံပငျအဖြားထိ ဆီလိမျးပွီး နောကျထပျ မိနဈ ၃၀ ထားပါ။ ပွီးတာနဲ့ ရှနျပူနဲ့ ခေါငျးလြှျောခြ လိုကျပါ။ (ရနှေေးနှေးလေးနဲ့ လြှျောရငျ ဆီပိုပွောငျပါတယျနျော..) ဒီနညျးလမျးလေးကို တဈပတျ ၃ ကွိမျ ပွုလုပျပေးမယျဆိုရငျ ဆံသားသနျစှမျးဖို့ အထောကျအကူဖွဈစမှောပါ။
Related Article>>> ယောငျးတို့ရဲ့ဆံသားလေးတှကေနျြးမာနဖေို့ ပြားရညျကိုဘယျလိုအသုံးခမြလဲ။
၂။ ကွကျသှနျဖွူနဲ့ ပြားရညျ
ကွကျသှနျဖွူ (၈) မွှာ
ပြားရညျ စားပှဲတငျဇှနျး (၁) ဇှနျး
ကွကျသှနျဖွူတှကေို ကွိတျပွီး အရညျညှဈလိုကျမယျဆိုရငျ စားပှဲတငျဇှနျး (၁) ဇှနျးစာ အရညျ ရမှာပါ ယောငျးရေ။ ဒီအရညျနဲ့ ပြားရညျစားပှဲတငျဇှနျး (၁) ဇှနျးစာ ပေါငျးပွီး နှဈမြိုးသမအောငျ ရောမှပေါ။ ဆံသားနဲ့ ဦးရပွေားကို လိမျးပေးပွီး မိနဈ ၂၀ လောကျထားပွီးရငျ ရှနျပူနဲ့ လြှျောခပြါ။ တဈပတျကို (၂) ကွိမျ ဒါမှမဟုတျ (၃) ကွိမျပွုလုပျပေးမယျဆိုရငျ ဆံသားကနျြးမာသနျစှမျးစပေါတယျ။
ကွကျသှနျဖွူနဲ့ ခငျြး ကို ညကျတဲ့အထိ ထောငျးပါ။ ဒယျအိုးထဲမှာ သံလှငျဆီကို အပူပေးပွီး ကွကျသှနျအနှဈ ထညျ့ပါ။ အဖတျလေးတှေ ရှရေောငျသနျးသှားရငျ မီးပိတျပါ။ ဆီအေးသှားတာနဲ့ ဆီစဈပွီး အဖတျလကျကနျြလေးတှေ ဖယျထုတျပါ။ ဆံသားပျေါမှာ ဆီလိမျးပွီး ဦးရပွေားကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး နှိပျနယျပေးပါ။ ၁၅ မိနဈလောကျကွာပွီဆိုရငျ ဦးရပွေားကနေ ဆံပငျအဖြားထိ လိမျးပွီး နောကျထပျ မိနဈ ၃၀ ထားပါ။ ပွီးတာနဲ့ ရှနျပူနဲ့ ခေါငျးလြှျောပါ။
ကဲ..စမျးကွညျ့ကွရအောငျ… တကယျသနျလာရငျ မုနျ့ကြှေးနျော 😛
Tags: benefits, Garlic, Growth, hair, uses
ခဏလောက်မတွေ့ဘဲနေရအောင်လို့ သူပြောလာတဲ့အခါ ဘာလုပ်သင့်လဲ
Ei Mon November 27, 2018